सुत्ने बेला किन ब्रा खोलेर सुत्ने? नखोल्दा के हुन्छ ? हरेक महिलाले जान्नै पर्ने ! – hamrosandesh.com
रातो दाग बस्छ
टाइट ब्रा लगाएर सुत्दाखेरि हुने सबैभन्दा खराब नतिजा भनेको क्यान्सर हो । टाइट ब्रा लगाएर सुत्ने युवतीलाई स्तनको क्यान्सर हुने जोखिम बढी हुने गरेको विभिन्न अनुसन्धानहरुले देखाइसकेका छन । किनकि टाइट ब्राले छातीको भागमा रक्तसञ्चारलाई अवरुद्ध गर्छ, जसले गर्दा व्यक्ति क्यान्सरजस्तो रोगको शिकार हुने जोखिम बढ्छ । वर्षौसम्म टाइट ब्रा लगाएर सुत्ने युवतीको स्तनमा गाँठा देखा पर्ने सम्भावना पनि बढी हुन्छ । एजेन्सीको सहयोगमा